Soosaarka Calanka-Xirmooyinka Xayeysiinta ugu Fiican iyo Warshad | Farshaxanka & Farshaxanka Jesson Flag
Feejignow Dhacdadaada Xiga
Ma waxaad raadineysaa wado aad ku qabato indhaha dadka ku ag maraya bandhiggaaga ganacsi ee soo socda ama dhacdooyinka kale? Markaa tixgeli inaad ku darto calanka baalasha caadiga ah qolkaaga. Iyada oo calan xayeysiin baal caado ah leh, qolkaaga ayaa istaagi doona, taasoo dadka ka dhigeysa inay istaagaan oo ay fiiro u yeeshaan. Markay dad badani istaagaan qolkaaga, waxaad heli doontaa fursado badan oo aad ku weydiisato iib.
Maro kala duwan oo loogu talagalay Baahiyaha Muujinta Kala Duwan
Waxaa jira xulasho ballaaran oo dhar ah xulashooyinka. 110g caag dhejis ah iyo 100D polyester ayaa ah dharka caadiga ah ee lagu daabaco calanka xayeysiinta. 110g polyester tolmo leh ayaa lagu talinayaa in la sameeyo calamada baalal hal dhinac leh halka 100D polyester uu caan ku yahay daabacaadda calamada laba geesoodka ah. Haddii aad leedahay baahiyo kale oo gaar ah, 115g polyester tolosh ah, 130g polyester dhalaalaya, 115g polyester iyo 210D oxford ayaa sidoo kale xulashadaada ah.
Ku gaadhsii fariintaada qaab wax ku ool ah
Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee calanka baalku waa qaabkeeda gaarka ah. Naqshadeynta calanka xayeysiinta ah ee naqshadeysan ee dhererka dhuuban ayaa kaa caawinaya in farriintaada la gaarsiiyo Tani waa aalad bandhig weyn oo lagu xayeysiiyo waxyaabaha gaarka ah ee hadda socda ama hal ku dhig ama wax la bixiyo, maxaa yeelay dadka ayaa u fiirsanaya iyaga.
Qaabka iyo nashqadda qaabkan calanka ah ee gaarka ahi waxay u oggolaaneysaa inay wax yar ku dhex socoto neecawda, haddana aan u dhaqaaqin wax badan oo aan la akhriyi karin. Tani waxay ka dhigeysaa mid wax ku ool ah labadaba qabashada dareenka iyo ku dhawaaqida yoolalkaaga suuq-geynta. Calanku wuxuu ka kooban yahay muuqaallo muuqaallo dhalaalaya, midabbo leh oo hufan oo cakiran, wuxuuna ku fadhiyaa saldhig adag oo ka shaqeeya gudaha ama dibedda.
Xullo Calanka Baal ee Qiyaasaha Habboon ee Dhacdooyinkaaga
Waxaan bixinaa noocyada caadiga ah iyo kuwa casriga ah ee calanka xayeysiinta iyo dhererka calamaduhu waa calan kala duwan oo wax yar ka duwan. Nooca caadiga ah, waxaad dooran kartaa 9ft, 13ft, iyo 15ft halka cabbirka nooca nacnaca uu yahay 8ft, 11ft iyo 16ft.